Rehefa mamaky ireo antontan'isa roa ireo ianao dia ho gaga. Maherin'ny 45% amin'ireo orinasa rehetra no tsy manana tranokala. Ary amin'ireo DIY (Do-It-Yourselfers) izay manomboka manangana tranokala, ny 98% amin'izy ireo dia tsy mahavita mamoaka iray mihitsy. Tsy manisa akory ny isan'ny orinasa manana tranonkala tsy mitondra fiara tsotra izao… izay inoako fa isan-jato manan-danja hafa. Ity infographic avy amin'ny Webydo ity dia manondro ny olana lehibe tsy nahomby
Talata, Febroary 26, 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Ny varotra ecommerce manerantany dia mitombo amin'ny 19% isan-taona ary tsy hihena tsy ho ela. Ity infographic avy amin'ny Forix Web Design ity dia mampitaha ny telo amin'ireo sehatra mitarika - Magento, osCommerce ary OpenCart, hanampiana ireo mpampiasa hisafidy izay sehatra ecommerce mety ho tsara indrindra amin'ny tranokala fiantsenana. Ny telo amin'ireo sehatra ireo dia mihoatra ny herin'ny 30% amin'ny tsena. Na dia misy safidy maro hafa aza any, mampiasa sehatra ecommerce ekena tsara izay